श्रीमानले शारीरिक सम्बन्ध नराखेपछि आत्मह*त्या गरेकी डाक्टर प्रियाको सुसा*इड नोटले संसारलाई रूवायो…
मृ*त्यु रोज्नुअघि उनले फेसबुकमा सुसा*इड नोट लेखेकी थिईन् । उक्त सुसाइड नोटले भारत लगायत सामाजिक सञ्जालमा लामो समयदेखि चर्चामा
नया दिल्ल्ि, आफ्नो श्रीमान समलिङ्गी भएपछि अल इन्डिया मेडिकल इन्सिच्युट (एम्स) की डाक्टर प्रिया वेदीले सुसाइड नोट लेख्दै आत्मह*त्या गरेको घटनाले संसारभर चर्चा पायो। हृदयविरक सुसा*इट नोट लेख्दै डाक्टरले आफ्नो प्राण त्यागेकी उनको पिडाले संसारलाइ रूवायो । विवाहपछि सजाएका सपना सबै भताभुङ भएपछि जीवन मरुभूमिमा परिणत भएको भन्दै आत्म*ह*त्या गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
मृ*त्यु रोज्नुअघि उनले फेसबुकमा सुसा*इड नोट लेखेकी थिईन् । उक्त सुसा*इड नोटले भारत लगायत सामाजिक सञ्जालमा लामो समयदेखि चर्चामा रहिरह्यो ।
उनले फेसबुकमा लेखेको सुसाइड नोट नोट यस्तो थियो :
म पछिल्लो पाँच वर्षदेखि डा. कमल वेदीसँग दाम्पत्य जीवन बिताइरहेकी छु । दाम्पत्य जीवनको महत्वपूर्ण अंश शारीरिक सम्बन्ध यो अवधिमा हामीबिच कहिल्यै भएन । विवाहको ६ महिनासम्म मैले आफूलाई सामान्य रुपमा सम्हाले, त्यसपछि मेरो मनमा आउन थाल्यो, ‘आजसम्म किन शारीरिक सम्बन्धका लागि मेरा श्रीमान् तयार भएनन् ?’
मेरो इमेल कसैले ह्याक गरिदिएको छ ।’ मनमा शंका राखेरै मैले उनको कुरामा विश्वास गरेँ । त्यसपछि भने उनले मसँग ८ देखि १० पटकसम्म यौ*नकर्ममा लिन हुने असफल प्रयास गरे
एकदिन मैले फेक इमेल आइडी भेट्टाएँ, जसको माध्यमबाट मेरा श्रीमान् समलिंगीहरुसँग कुरा गर्थे, पोर्न साइटहरु हेर्न गर्थे । यो इमेलमा रहेका सबै म्यासेज हामीले विवाह गर्नु पहिलेका थिए । जब मैले यसबारे श्रीमान्सँग कुरा राखेँ । उनले भने, ‘मेरो इमेल कसैले ह्याक गरिदिएको छ ।’ मनमा शंका राखेरै मैले उनको कुरामा विश्वास गरेँ । त्यसपछि भने उनले मसँग ८ देखि १० पटकसम्म यौ*नकर्ममा लिन हुने असफल प्रयास गरे । मैले यो कुरा कसैलाई बताउन सकिनँ, किनभने म उनीसँग प्रेम गर्थेँ । लाग्थ्यो, एकदिन सब ठिक हुन्छ ।
परिस्थिति यतिमैँ सिमित रहेन । बरु उल्टै उनले मेरो परिवार र ममा खोट रहेको आरोप लगाउन सुरु गरे । मलाई मानसिक रुपमा प्रताडित गर्दै जान थाले । म चाहिँ उनकी श्रीमतीका रुपमा आफूलाई उभ्याएर हरेक कुरा सहन थालेँ । उनले सानातिना कुरामा पनि मलाई निकै दुःख दिए । करिब एकमहिना पहिले उनले भनेका थिए, म समलिंगी हुँ वा बाइसेक्सुअल हुँ । म विश्वस्त छु, उनी समलिंगी थिए किनकी मसँग रहँदा उनमा कहिल्यै उत्तेजना भएन । उनी आफ्नो पुरुष साथीसँग भने यौ*नको भरपुर आनन्द उठाउन सक्थे । काश्मिरमा रहेका उनका यौ*न पार्टनर फेक इमेल आइडीबाटै उनीसँग जोडिएका थिए ।
म तिमीलाई धेरै प्रेम गर्छु । तर, तिमीले मेरा सारा खुशी निमोठिदियौ ! तिमी सैतान हौ, जसले मेरो जीवन बर्बाद बनायो । हाम्रो समाजमा अरु पनि कोही यस्तै छौ भने प्लिज केटीसँग विवाह नगर्नू ।
म श्रीमतीका रुपमा त्यो समस्याबाट उन्मुक्ति दिलाउन मद्दत गर्न चाहन्थेँ । तर, उनले भने मलाई सताइरहे । गएको रात मेरा लागि यति भयाबह भयो कि, मैले निर्णय गरेँ अब उनीसँग जीवन जिउन सक्दिनँ ।
अन्तमा डा. वेदी म तिमीलाई धेरै प्रेम गर्छु । तर, तिमीले मेरा सारा खुशी निमोठिदियौ ! तिमी सैतान हौ, जसले मेरो जीवन बर्बाद बनायो । हाम्रो समाजमा अरु पनि कोही यस्तै छौ भने प्लिज केटीसँग विवाह नगर्नू । कोही समलिंगी यस्तो गर्छ भने ऊ त्यो केटीको मात्रै होइन, घरपरिवार र आफन्तको भावनामाथि पनि खेलबाड हो ।
डा. बेदी मैले तिमीबाट केही चाहिनँ । केही चाहेकी भए पाँच वर्ष तिमीसँग हुन्नथेँ । यत्ति चाहेकी थिएँ, तिमीसँगै रहन । किन थाहा छ, म तिमीलाई हदभन्दा धेरै माया गर्थेँ । तिमी यस्तो कुरा कहिल्यै महशुस गर्न सक्दैनौ, किनकि तिमी त अप*राधी हौ । प्रियाले दिल्लीको एक होटलमा आराम गर्ने भन्दै पंखामा झु*ण्डिएर आत्मह*त्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ । एजेन्सी